Mararka qaarkood, aad rabto in aad raad raac aad telefoon Motorola. Tani waxay dhacdaa marka aad kaliya rabaa inaan deeq ama dadka kale soo diro telefoonka Motorola, ama waxay leeyihiin on sale. Ama, waxaad la qorsheeyo in aad bixiso phone jir Motorola dib ugu AT & T, Verizon ama dadka kale, si aad u hesho adeegyada qaarkood. Ama, waxaad kaliya oo aad ka khasaare xogta weyn ka heli loo isticmaalaa in lagu taageero aad Motorola ee wax ka dhicin kiis qaba. Wax kasta oo sabab u yahay, waxaan u malaynayaa in waxa ugu muhiimsan waa sida loo raad raac Motorola Droid Razr, Moto X, XOOM ama dadka kale. Si aad u samee, waxaan idinku si adag ugu talinaynaa qalab saddexaad xisbiga magacaabay Wondershare MobileTrans ah.
Kaabta Motorola la One Click
Kaabta aad Motorola in PC iyo soo celinta wax kasta oo ka kaaftoomi phone taageeray si xor ah.
Xiriirada kaabta on xasuusta phone Motorola, Twitter, Google, Facebook, iwm
Farriimaha qoraalka Copy, barnaamijyadooda, sawiro, abuse wac, music iyo video ka Motorola in PC.
Soo Celinta aad Apple qalab, Nokia iyo qalab Android kaga imaanayo Motorola si fudud.
Si fiican u shaqeeyaan Motorola Moto X, Droid Razr, XOOM, MB860, iyo in ka badan
Gurmad Motorola ayaa software wax fudud idiin in ay barnaamijyadooda gurmad, xiriirada, video, photos, music, video, abuse call oo SMS ka Motorola in PC, una soo celiso telefoonka ah (waxay noqon kartaa Nokia phone, iDevice ama qalab Android.) .
Saft iyo Assaye lacag la'aan ah, waxaa ku caawinaysa gurmad dhow wax walba oo ku saabsan Motorola in PC. Markaas, aad u soo celin kartaa si aad qalab ah marka aad u baahan tahay.
Waxa ay taageertaa badan oo telefoonada Motorola, Nokia (Symbian) telefoonka, iPhone, iPad iyo iPod Touch, iyo qalab Android dheeraad ah. Get more info halkan >>
Kaabta Motorola in PC
Kaabta Motorola in qalab
Just doonayaan inay ku raad joogto ah Motorola? Ama aad telefoon cusub oo aan gacantaada ku jira? Walt dhex tutorial si aad u barato sida loo raad raac Motorola in PC, ka dibna loo soo celiyo si ay telefoonka.
Tallaabada 1. Ku rakib iyo Burcad kaabta Motorola ee Software
Bilowga aad, dejisan iyo rakibi gurmad Motorola ee software on your computer. Marka homepage ka ​​muuqataa, dooro ee kaabta iyo Soo Celinta hab oo guji kaabta
Tallaabada 2. kaabta Your Motorola in PC
Hel aad Motorola Moto X / Droid Razr / XOOM ama qof kale oo ku xiran cable USB ah. Waxaa si dhakhso ah loo baari doono oo soo bandhigay bidixda ee suuqa. Dooro content in aad rabto in aad gurmad dhexe. Sida aad ka arki, aad awoodo gurmad xiriirada, SMS, abuse wac, video, sawiro, muusig iyo barnaamijyadooda ka Motorola in PC. Markaas, riix Start Copy .
Tallaabada 3. Soo Celinta aad iDevice / Nokia / Device Android la Motorola ee kaabta File
Iyadoo Motorola gurmad file, waxaad soo celin karaa qalab kasta oo ay taageerayaan, oo ay ku jiraan iPhone, iPad telefoonka, iPod taabto, Nokia (Symbian), iyo qalab Android. Connect telefoonka aad rabto in la soo celiyo si PC via cable USB ah. By gujinaya soo celi , waxaad geli suuqa kala dib u soo kabashada. Dhinaca bidix, dooro gurmad Motorola faylka. Markaas, hubi in aad content doonayay oo guji Start Copy .
Content ayaa kuu soo celin karaa waa ka duwan OS telefoonada.
1. Waxaad soo celin karo xiriirada, SMS, video, sawiro, barnaamijyadooda Guda wac, iyo music in aalad Android.
2. You'r awoodaan si loo soo celiyo music, sawiro, video iyo xiriirada in iDevice ah. SMS sidoo kale noqon kartaa in la soo celiyo iPhone.
3. Xiriirada noqon kartaa celiyo Nokia (Symbian) telefoonka ah.
Haddii aad leedahay telefoonka cusub ee gacantaada, sidoo kale si toos ah waxaad isticmaali kartaa telefoonka in Phone hab kala iibsiga si ay u gudbiyaan xogta Motorola, waxa uu.
Tallaabada 1. Orod software ku PC
Waxa ugu horeeya ee aad samaynaysaa waa in ay gashato on PC. In qaybihiisa, u tag Phone in hab Phone kadib markii gujinaya Start .
Tallaabada 2. Isku Your Motorola Phone iyo Device kale oo ay taageerayaan in PC
Isticmaal fiilooyinka USB labada ah ee Motorola iyo telefoon kale oo ay taageerayaan ku xidhmaan PC. Qalabka wuxuu u taageeray noqon kartaa iPhone, iPad, iPod taabto, qalab ama Android Nokia phone.When aqoonsan yahay, labada qalabka la soo bandhigi doonaa in uu furmo.
Tallaabada 3. kaabta Motorola in Phone An taageerayaan
Sawirka content aad rabto dhexe. Markaas, riix Start Copy .
Iyada oo software ah, aad karto
1. Kaabta Motorola xiriirada si phone Nokia ah
2. Motorola music kaabta, xiriirada, sawiro iyo video in an iPhone, iPad iyo iPod. SMS la soo sidoo kale taageeray karaa in iPhone.
3. Motorola Chine ee kaabta, abuse wac, video, photos, music, xiriirada iyo SMS si aalad Android.
Sidee si ay u gudbiyaan Content ka Motorola si iPhone?
Sida loo Copy Music ka iPod in Android?
Sida loo Faylal ay ka Android inay Android?
Sida loo Copy Photos ka iPhone in iPad?
Sidee si ay u gudbiyaan Content ka iPhone in Android?
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka Nokia in Android?
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Android inay HTC?
Sida loo Demi Xogta laga Phone in Phone?
> Resource > Android > Sida loo kaabta Motorola Droid Razr / Moto X / XOOM